Ny raharaham-barotra amin'ny fitantanana ny fananana nomerika | Martech Zone
Ao anatin'ny tontolo iray itahirizan'ny ankamaroan'ny rakitra antsika nomerika manerana ny fikambanana dia ilaina ny manana fomba ahafahan'ny departemanta sy olon-tsotra samy hafa miditra amin'ireo rakitra ireo amin'ny fomba voalamina. Noho izany, ny lazan'ny vahaolana momba ny fitantanana ny fananana nomerika (DAM), izay ahafahan'ny mpampiasa mampakatra rakitra fisie, sary stock, fampisehoana, antontan-taratasy, sns. Ao amin'ny tahiry iraisan'ny antoko anatiny. Fanampin'izay, midina be ny fahaverezan'ny fananana nomerika!
Niara-niasa tamin'ny ekipa tao Widen aho, a vahaolana fitantanana fananana nomerika, amin'ity sary ity, mijery ny raharaham-barotra amin'ny fitantanana ny fananana nomerika. Matetika ny orinasa dia mampiasa kapila iraisana na mangataka fotsiny ny hafa handefa rakitra amin'ny alàlan'ny mailaka, saingy tsy porofo tsy mahomby ireo. Tamin'ny fanadihadiana vao haingana, 84% amin'ireo orinasa no mitatitra fa ny fitadiavana fananana nomerika no fanamby lehibe indrindra ananan'izy ireo rehefa miasa amin'ny fananana nomerika. Fantatro ny halehiben'ny fanaintainana sy ny fotoana very rehefa tsy mahita rakitra ao amin'ny arisako mailaka aho na ao amin'ny lahatahiry solosainako. Fa alaivo an-tsaina izany fahasosorana izany amin'ny sehatra orinasa lehibe misy mpiasa marobe; izany dia very fotoana be, fahombiazana ary vola be.
Ankoatr'izay, miteraka olana eo amin'ny departemanta koa izy io. 71% amin'ireo fikambanana no manana olana amin'ny fanomezana ny mpiasa hafa fidirana amin'ny fananana ao anatin'ny fikambanana, izay mampihena ny fiaraha-miasa eo amin'ny departemanta. Raha tsy afaka manome mora foana ny mpamorona ahy aho, dia tsy vitany ny manao ny asany. DAM dia manome fomba iray ahafahan'ny olona rehetra ao amin'ny fikambanana miditra amin'ny fananana nomerika rehetra ilain'izy ireo ao amin'ny toerana voarindra. Miaraka amin'ny DAM, vita haingana sy mahomby kokoa ny raharaha.
Mampiasa vahaolana fitantanana fananana nomerika ve ianao izao? Inona no karazana olana iainanao rehefa mifampiraharaha amin'ny fananana nomerika manerana ny fikambanana misy anao?
Tags: Content Marketingtohodranon'iDingana dizitalyfitantanana fananana nomerikasaryfampidiranaLahatsary MarketingrepositoryVideo fananan'nyfitehirizana horonan-tsaryhihamalalaka